Inona no COB ary nahoana no zava-dehibe?-NITONDRA Jiro Fototra-FETON CORPORATION Co.,Ltd
Home>Resources>Fototry ny jiro LED
Inona ny COB ary maninona no manan-danja?
Fotoana: 2020-05-07 Hits: 40
Noho ny fampielezana be dia be ny vokatra LED eo amin'ny sehatry ny jiro, ny COB dia lasa iray amin'ireo vokatra lehibe indrindra amin'ny indostrian'ny famonosana. Na izany aza, maro ny olona no mbola tsy mahatakatra ny tena dikan'ny COB.
Avy eo, hitondra anao amin'ny tontolon'ny COB ny ekipa FETON.
Inona ny COB?
COB (Chip on Board) dia teknolojia fanaonasa LED ampiasaina ho an'ny motera jiro LED. Midika izany fa maro ny sombin-tsolika LED dia mivondrona miaraka amina tabataban'ny LED substrate iray ihany ho toy ny alàlan'ny jiro iray.
Mba hahatrarana ny fahombiazan'ny hazavana avo, ny sombin-tsolika LED dia miraikitra mivantana amin'ny substrate metaly fitaratra izay misy taratra avo be.
Misy takelaka substrate LED misy fitaovana samihafa, toy ny zana-kazo varahina, zana-kazo aluminium, hazo seramika sy ny sisa. Amin'ireo safidy rehetra ireo, ny sombin-tsokosoko amin'ireo birao seramika dia manana fampisehoana tsara kokoa raha ny fahombiazan'ny jiro sy ny fampihenana ny hazavana.
Inona no tombontsoa azo avy amin'ny COB?
1. kalitao tsara
Ny SMD nentim-paharazana dia mamorona singa loharanon-jiro maivana amin'ny alàlan'ny fampifandraisana fitaovana marobe amin'ny «épecture», izay hiteraka olana amin'ny jiro, glare ary matoatoa.
Na izany aza, ny COB LED dia fonosana marika marobe izay afaka mampitombo ny faritry ny jiro mihoatra ny 10 mihoatra ny fotoana, ka izany no hisorohana ny fahatsapana tsy mahazo aina amin'ny ambaratonga farany. Ary ny COB LED no loharanom-pahazavana ambony indrindra, ny zoro maivana dia lehibe ary mora zatra, noho izany dia mety hampihena ny fahaverezan'ny fanavaozana ny hazavana.
2. ny fanamboarana manokana
Ny COB dia afaka mahafeno tsara ny filan'ny mpanjifa samihafa. Amin'ny fanovana ny rafitra sy ny fitaovana dia afaka manova ny famoahana ny jiro sy ny refy ivelany misy ny loharano maivana isika.
Mandritra izany fotoana izany, ny birao substrate LED miaraka amin'ny hatevin'ny 0.4-1.2mm dia afaka mampihena ny lanjan'ny entana 1/3 amin'ny vokatra nentim-paharazana, ka mampihena ny vidin'ny rafi-pitatitra, fitaterana ary injeniera ho an'ny mpanjifa.
3. Fampiharana fomba fampiasa marobe
Alohan'ny, mila loharano LED maro ianao hamoahana famokarana lumen avo. Saingy izao, ny sôkôla COB dia mety hamokatra lumens be dia be izay angovo tsy dia angovo.
Ny COB dia manolotra fibodo lava be dia be avy amin'ny fonosana bitika ary mamela ny famolavolana mora azo amin'ny luminaire.
Ny fampiharana ny loharano maivana COB dia tena mety, ary azo ampiharina amin'ny jiro tsy misy dingana hafa.
Inona avy ireo fampiharana lehibe an'ny COB?
Ny fampiharana lehibe dia ny sehatra misy fepetra takiana ambonimbony kokoa amin'ny loharano maivana.
Fampitaovana jiro: Jiro, rindrina jiro, jiro valindrihana, jiro famakiana, jiro marika, jiro firavaka, jiro hazo, sns.
Fampiharana ny scene: Toeram-pivarotana, fivarotana akanjo, trano fanaovana kabary, kabinetra, efitrano fandraisam-bahiny, hotely, efitrano fatoriana, lakozia, sns.
Lahatsoratra mifandraika -
Fitaovana fanilo ankapobeny
Taloha: Afaka mamono ireo Virus sy bakteria ve ny jiro ultraviolet？
Next: Ny fahazoana ny Index Rendering loko miaraka amin'ny LED